HCG False Positive မှားပြီး များနေခြင်း - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
HCG False Positive မှားပြီး များနေခြင်း
အသက် ၂၇၊ မ။ (၁) HCG Strip တွင် Positive ပြ၊ (၂) ဆီးစပ်အောင့် (၃) Ultrasound Report တွင် သားအိမ်တွင် ရေအိတ်တွေ့ရှိ။ ရာသီမလာသည်မှာ တလခန့်ရှိ၊ အိမ်ထောင်ရှိ၊ ကလေးတယောက်ရှိ။ (၁) ရေအိပ်တည်လျှင် ရာသီလာတတ်၊ မလာတတ်။ (၂) မည်သည့်အတွက်ကြောင့် HCG Strip တွင် Positive ပြသနည်း။ (၃) ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ပါလား။
ဆီးစစ်တဲ့အခါ ကိုယ်ဝန်မရှိဘဲ HCG Levels ဟော်မုန်းများနေတဲ့ မှားပြီး + ပြနိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်။
1. Chemical pregnancy ဓါတုကိုယ်ဝန်
သန္ဓေက သားအိမ်မှာတွယ်ကပ်မှုမဖြစ်။ သားအိမ်မှာ အလုံးလိုရှိနေတာ။ သားအိမ်မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်ရှိတာ။ ပရိုဂျက်စတီရုန်းဟော်မုန်းနည်းလွန်းတာ။
2. Ectopic pregnancy သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း
3. Recent miscarriage or abortion မကြာသေးမီက ကိုယ်ဝန်ပျက်ထားခြင်း
4. User error စမ်းသပ်ကရိယာအမှား
6. Medications ဆေးတချို့ကနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
hCG trigger shot ခေါ်ထိုးဆေး။ Novarel, Pregnyl, Ovidrel, Profasi တွေပါတယ်။
diazepam (Valium) or alprazolam (Xanax)
clozapine or chlorpromazine
furosemide (Lasix, Diuscreen)
methadone (Dolophine) ဆေးတွေလည်းပါတယ်။
7. Certain medical conditions တခြားရောဂါအခံရှိနေသူ
urinary tract infection ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊
kidney disease ကျောက်ကပ်ရောဂါတချို့၊
ovarian cysts (corpus luteum cysts) မျိုးဥအိမ်အိတ်၊
ovarian cancer မျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ၊
pituitary problems ဦးနှောက်အကျိတ်။
သတ်ပုံတချို့ကို ပြင်လိုက်ပါတယ်။ ဆောရီး။ မေးတဲ့သူမှာ မျိုးဥအိမ်အိတ် ခေါ် ဆစ်စ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်။ ဆရာကတော့ မမြင်ရ မစမ်းရလို့ စာအရဖြစ်နိုင်တာသာပြောနိုင်။